ငတျမပွေ – My Blog
ကမြ အသကျ ၁၃ နှဈ။ ကမြတို့ရှာကို ရနျကုနျမှရှိတဲ့ အမအေ့မြိုးတှေ အလညျလာကွတယျ။ ကမြ တဈခါမှ မတှဖေူ့းဖူးလေ။ အမြိုး ရှိတယျ ဆိုလို့သာ သိရတာ မွငျလညျးမမွငျဖူးကွပပေဲကိုး။ အမြိုးတှေ ၅ယောကျလောကျလာလညျကွတာ အဲ့ထဲမှာ အမမေ့ောငျ တဈဝမျးကှဲ ၂ယောကျရယျ၊ အဖိုးလေးနဲ့ သူ့မိနျးမ ၊ ကမြ အဖိုးလေး ၁ယောကျရယျ ကမြတို့ ကြောငျးပိတျနှရောသီရကျတှဆေိုတော့ ကမြလညျး အိမျမှာထမငျးခကျြ ရခေပျ ပွီးရငျ သငယျခငျြးတှနေဲ့သှားဆော့သေးတယျ။
ကမြ ဦးလေးဝမျးကှဲ ၂ယောကျက ဦးဝေ နဲ့ ဦးမိုးလို့ချေါတယျ။ ဦးဝကေ အိမျထောငျနဲ့ အသကျ ၃၀ ကြျော။ဦးမိုးက လူပြို အသပျ ၂၇ လောကျ။ သူတို့ ညီအကိုတှကေ ရနျကုနျမှာ taxi မောငျးကွတာ ကားသမားတှပေေါ့။ ဦးဝကေ အရပျနညျးနညျးပုတယျ အသားဖွူဖွူ ၊ဦးမိုးက အရပျရှညျတယျ အသားဖွူဖွူပဲ၊ ကမြကလညျး အပြိုဖျောဝငျကာစဆိုတော့ ထမိနျကွီးကားယားကားယား ဝတျထားတော့ ဖငျဖားဖားနဲ့ အပြိုကွီးလိုလိုပေါ့။
ဧညျ့သညျတှေ ရောကျပွီး ၂ရကျလောကျကွာတော့ ကမြ စ သတိထားမိတာ ဦးမိုးတဈယောကျ ကမြအနားက ဖွတျသှားတိုငျး ကမြဖငျကို မသိမသာရှပျထိ ကိုငျသှားတကျတာပဲ။ ကမြလညျး အစက သိပျသတိမထားမိဘူးလေ။နောကျတော့ ကမြ ဆော့ရငျလညျး အမွဲကွညျ့ကွညျ့နတေကျတယျ။ သူ ကမြအနားက ဖွတျသှားတိုငျး ကမြဖငျကု ထိထိသှားတိုငျး ကမြရငျထဲတထိပျထိပျဖွဈသှားမိတယျ။ တနေ့ ဦးမိုးက “သမီး ခဏလာပါအုနျး” “ဟုတျကဲ့” သူထိုငျနတေဲ့ အနားကို ကမြတိုးသှားလိုကျသညျ။
“လာ ဒီမှာထိုငျပါအုနျး ပွောစရာရှိလို့” သူ့နံဘေး ကမြထိုငျလိုကျသညျ ခကျြခငျြး သူဘာမှမပွောသေး “ငွိမျငွိမျလေးနနေျော” ဟု ဆိုပီး ကမြနို့ထိပျကလေးကို စမျးသလိုလိုဖွငျ့ ထိလိုကျသညျ။ ကမြ လနျ့သှားသျောလညျး ငွိမျနလေိုကျသညျ။ ကမြကလညျး ရှမီးအကြီင်္ပဲဝတျထားတော့ နို့တှကေ ဖောငျးကားနပွေီး အသာနိုကျလို့ရတယျလေ။ တဖွညျးဖွညျး ကမြ အကြီင်္ထဲသူ့လကျတှေ လြှိဝငျလာကာ နို့သီးခေါငျးထိပျတှကေို အသာဆှဲပှတျနေ၏။သူ့လကျကွမျးတှနေဲ့ ဖိဖိပွီးကိုငျတော့ ကမြနို့သေးသေးလေးတှေ တောငျလာတော့သညျ။
ကမြ ဘာမှမပွောရဲ နို့ကို ကိုငျထားပွီး ကမြအကြီင်္ထဲနိုကျထားသော သူ့လကျတှကေို အပွငျမှကိုငျထားလိုကျ၏။ “နို့လေးတှကေသေးသေးလေးတှမေလို့” “နာလား” “ငွိမျငွိမျလေးနနေျော” သူ့ပါးစပျကလညျး တတှတျတှတျပွောနသေေးသညျ။ ကမြ အသာငွိမျခံနလေိုကျသညျ။ ခဏကွာတော့ ကမြအိမျကလူကွီးတှေ မွငျသှားမှာကို စိုးရိမျမိသှားပွီး ရုတျတရကျထရပျလိုကျမိသညျ။ ဦးမိုးက ကမြကို ကွညျ့နလေိုကျ၏။ ကမြ ရှကျလညျးရှကျသှားပွီးထှကျပွေးသှားမိသညျ။ ကမြ နို့အစုံမှာ သူ့လကျဗှရောတှေ ကပျညှိလြှကျနနေသေေးသညျ။
ဖောငျးကားနသေော နို့တှနှေငျ့ တငျးကားလာသော ကမြစောကျဖုတျက ကာမကိုလိုလားနသေညျလားမသိပေ။ စောကျဖုတျဝကို ကိုငျလိုကျတော့ အရညျတှရှေမျးနတေော့သညျ။ ညအိပျတော့ ကမြတှေးနမေိသညျ။ ဦးမိုးသာ လိုးခဲ့ရငျ ကမြ ခံမှာလား ဆိုတာ။ဒါပမေယျ့ အဲ့နတေ့နလေုံ့း သူ့ကိုကမြမတှရေဲ့ပေ။မနကျရောကျတော့ အိမျကအမတေို့က တဈဖကျရှာက အမြိုးတှအေလှူကို သှားဖို့ပွငျဆငျနကွေသညျ။ ကမြ အဖိုးတှရေော ပေါ့။ ကမြကတော့ အိမျမှာဆော့ရငျးနဲ့ နခေဲ့မညျလို့ ပွောလိုကျသညျ။ ဦးမိုးကတော့ သူ့သူငယျခငျြးတဈယောကျနှငျ့တှမေ့ညျဟုဆိုကာ မနကျအစောထဲက ထှကျသှားသညျတဲ့။
အမတေို့ အားလုံးထှကျသှားကွတော့ ကမြ အိမျမှာထမငျးအိုးတညျရငျး ကနျြနခေဲ့လိုကျသညျ။ကယျြဝနျးလှသော ကမြတို့ခွံဝိုငျးထဲတှငျ ကမြတို့ အိမျတဈအိမျသာ ထီးထီကွီးရှိနေ၏။ထမငျးအိုး တညျအပွီး ခဏအကွာကမြရခြေိုးလိုကျသညျ။ ကမြ ရခြေိုးပွီးထမိနျရငျလြားဖွငျ့ အိမျပျေါသို့ရောကျတော့ နောကျမှ ဦးမိုးအိမျထဲသို့ ဝငျလာသညျကိုတှရေ့သညျ။ ကမြလညျး “ဦးမိုး ပွနျလာပွီလား” “အငျး” အိမျတှငျ ကမြနှငျ့ သူသာ ၂ယောကျတညျး။ သူဘာတှေးနလေညျးဆိုတာတော့ ကမြ မသိပေ။ ကမြ စောကျဖုတျတှေ ကလိကလိဖွဈလာကာ ကွကျသီးတှထေလာတော့သညျ။
ကမြလညျး အိမျခနျးထဲမဝငျသေးဘဲ ထမိနျပွငျဝတျလိုကျသညျ။ ထမိနျက ပါးတော့ ကမြဖငျလုံးကို အတိုငျးသား ကောကိကွောငျးရာ ပျေါနသေညျ။ ဦးမိုးက အိမျရှစေ့ကျတီတှငျ ထိုငျနေ၏။ ကမြ အိမျခနျးထဲဝငျပွီး ခဏအကွာ နောကျမှမာကွောကွောအရာတဈခု တငျပါးမှာလာထောကျနပေသေညျ။လှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့ ဦးမိုး “ဟငျ ဦးမိုး” “ရှုး တိုးတိုး” သူ့ပုဆိုးကွားမှ ထောငျထှကျနသေော အရာတဈခု “ဦးမိုး စိတျမထိနျးနိူငျတော့ဘူး ခလေး” “ရှငျ” ဦးမိုးက ပွောရငျး ကမြကို ဆှဲဖကျလိုကျကာ ကုတငျပျေါသို့ လှဲလိုကျသညျ။ကမြ ဘာမှပွောခြိနျမရလိုကျပါ။ကမြ ထမိနျအပျေါပိုငျးကို ခြှတျ၍ နို့စူစူလေးတှကေို ဖိခကြော လကျဖွငျ့ပှတျနေ၏။ “အိုး” ကမြ ကငျြတကျသှားကာ တုနျသှားမိသညျ။
သူ့လကျတဖကျမှ ကမြပေါငျကို ကိုငျပွီး ပေါငျမှတဈဆငျ့ ကမြ စောကျဖုတျကို အုပျမိုးကာကိုငျလိုကျသညျ။ ကမြ တဈကိုယျလုံးယားလာပွီး “ဦးမိုး အဟငျ့ ဟငျ့” “တိုးတိုးလေးနနေျော ဦးမိုးက ကောငျးအောငျလုပျပေးမလို့” ကမြ ထမိနျကိုဆှဲခြှတျလိုကျကာ စောကျဖုတျအကှဲကွောငျးကိုနိုကျ၍ သူ့လကျခလယျကွီးဖွငျ့ ပှတျပေးနေ၏။ “အား ဦးမိုး သမီးရှကျတယျ” “ဦးမိုးလညျး အကုနျခြှတျမှာပဲ မရှကျနဲ့နျော” သူပွောရငျး ပုဆိုးကိုခြှတျလိုကျ၏။ အကွောတှေ ပွိုငျးထနသေော သူ့လီးကွီး ဒဈလနျနပွေီး မာတောငျနေ၏။ တျောတျောကွီး၏။ ဦးမိုးက အရပျလညျးရှညျတော့ လီးကလညျး ၆လကျမကြျော ရှညျနသေညျ။
လုံးပတျက ကမြလကျဖွငျ့ဆုပျကိုငျလြှငျတောငျ ပိုကွီးနသေေးသညျ။ ကမြ လကျကိုဆှဲယူကာ သူ့လီးတှကေို ကိုငျစသေညျ။ကမြလညျး ကမြကိုလိုးမယျ့ သူ့လီးကွီးကိုကိုငျလိုကျ၏။ မာတောငျ့နသေညျ။ ဒဈပွဲလနျကာ ဒဈထညျ့လြှငျပငျ ကမြစောကျဖုတျ ကှဲမညျ့အတိုငျးပငျ။ ကမြ ပေါငျနှဈခြောငျးကို ဖွဲကားပွီး သူ့ခေါငျးဝငျ၍ စောကျစိလေးကို လြှာနဲ့ လကျပေးတော့ ကမြ အျောလိုကျမိ၏။ “အား ရှီးရှိး ယားတယျ ဦးမိုး” သူခေါငျးကွီးကို ကိုငျကာ “အမလေး ယားလိုကျတာ” “ဦးမိုး လီးကိုလညျး စုတျပေးအုနျး” “အကွီးကွီးပဲ ဦးမိုး” “သမီး အလိုးခံဖူးလား” “ဟအငျး” ကမြ အလိုးမခံဖူးပမေယျ့ စာအုပျတှဖေတျ ကာအတှကွေုံ့တော့ရနေ၏။
ကမြ ဦးမိုးလီးကွီးကို ပါးစပျဖွငျ့ဆှဲဆှဲစုပျလိုကျတော့ ဦးမိုးကော့တကျကာ “လိုးကွရအောငျကှာ” ဦးမိုး စိတျမထိနျးနိူငျတော့ပဲ ကမြစောကျဖုတျကို တံတှေးဆှတျကာ ဖွဲလိုကျတော့သညျ။တံတှေးဆှတျမှ ဝငျမှာကိုး သူ့လီးက နဲတာကွီးမှမဟုတျတာ “အား” ဒဈအကုနျမဝငျသေးခငျမှာ ကမြ နာသှား၏။နို့တှကေို စို့ပေးကာ ဒဈကိုနှုတျလိုကျ ပွနျထညျ့လိုကျနှငျ့ ကမြဖီးတကျလာအောငျ လုပျပေးနသေညျ။ “အား ဦးမိုးရယျ သမီးကိုလိုးပါတော့။ ဦးမိုး လိုးတာခံခငျြလှပွီး စောကျဖူတျကှဲရငျ ကှဲပစေ” ကမြ ပစပျကလညျး အရှကျမရှိတော့ပေ။ အလိုးခံခငျြလှပွီကိုး နီရဲနသေော သူ့လီးတှကေ ကမြကို အသကျထှကျအောငျ လိူးတော့မညျ့ဟနျ “အား” လီးတဝကျဝငျတော့ ကမြအားကုနျအျောလိုကျသညျ။
ဦးမိုးခကျြခငျြး လီးကို ကမြစောကျခေါငျးထဲမှ ဆှဲထုတျလိုကျကာ “စောကျဖုတျက အမှေးပါးလေးဖောကျလိုကျပွီနျော။ သမီးကို ဦးမိုးလိုးပေးမယျနျော။ ကောငျးကောငျးလေး လိုးပေးမယျမအျောနဲ့နျော” ကမြခေါငျးတှေ တဆကိဆကျငွိမျ့၍ သူ့လီးကွီးကို ကမြစောကျခေါငျးထဲ တပေ့ေးလိုကျကာ သူဖငျကွီးကိုဆှဲထားလိုကျ၏။ ဦးမိုးလီးကွီးက ကမြစောကျဖုတျထဲကို အတိုငျးအဆမရှိဝငျသှားတော့သညျ။ “အား” “အား ကောငျးလိုကျတာ သမီးရယျ စီးပိုငျနတောပဲ” ကမြလညျး အျော သူကလညျးအျော၍ ကမြအပြိုမှေးပါး ပေါကျသှားပီး သှေးတှထှေကျလာတာတောငျ မနာတော့ပဲ ဦးမိုးလီးကွီးဝငျထားတာကိုတောငျ ပွနျမထုတျခိုငျးခငျြတော့ပေ။
“ဆောကျ့လိုးမယျနျော” “အငျး နာနာလေးလိုး ဦးရယျ” “ဖတျ ဖှတျ ဖှတျ ဘလှတျ” “အား အ အ အ အမလေး အား” “အငျ့ အငျ့ “ “ပွှတျ ပွှဈ့ ဖှတျ ဖှတျ” စောငျ့ခကျြတှေ မွနျဆနျလာကာ ကမြစောကျခေါငျးထဲမှ အသံပေါငျးစုံထှကျလာတော့သညျ။ ပကျလကျလနျလိုးတာ အားမရတော့ ဦးမိုးက ကမြကို “လေးဖကျထောကျ ကုနျးပေး ဦးအနောကျက ဆောငျ့လိူးပေးမယျ” “အငျး ဦးသမီးကို မညာမတာလိုးနျော” ကမြကုနျပေးတော့ ဦးမိုးက အနောကျမှာ လီးတကေ့ာ ဆောငျ့ထညျ့လိုကျ၏။ “အ ရှီးရှိး ဦးရယျ စောကျဖုတျတှပွေဲအောငျ လုပျနတောလား အဟငျ့ဟငျ့” “အား ကောငျးလိုကျတာကှာ “ ခှေးလိုးလိုးကာ ကမြစောကျခေါငျးထဲမှ လီးက စောကျဖုတျဝနဲ့ နံရံတှကေို ပှတျပှတျနတေော့ ကမြ ပိုကောငျးလာကာ ဦးမိုးလီးကွီးကို ဆှဲညှဈလိုကျ၏။
“နတေို့ငျးလိုးမယျနျော သမီး” “အား ဦးရယျ မွနျမွနျလိုးပေး အ အ အ “ “အငျ့ အငျ့ အား အား အား” “ဖှတျ ပလှတျ ပလှတျ ဖတျ ဖတျ” “အ အမရေေး နာလိုကျတာ အမလေး လီးကွီးကွီးနဲ့ ဆောငျ့လိုးနတော” “အ အ အ “ ဦးမိုးလညျး ကောငျးလာ၍ အသံထှကျ၍ ခပျမွနျမွနျဆောငျ့လာသညျ။ “အား ဦးရယျ သမီးကို နတေို့ငျးလိုးပေးနျော” “အငျး သမီးစောကျဖုတျလေးက ကောငျးတာကှာ” “ဦးလီးကွီးကလညျး သနျလိုကျတာ” “ဦးမိုးရယျ သမီး စောကျဖုတျလေးကှဲပါပွီ” “အငျ့ အငျ့ အငျ့” ဦးမိုးကလညျး မနားတမျးဆကျတိုကျလိုးနတေော့သညျ။
ကမြ လညျး ကောငျးလာ၍ ကော့ကော့ပေးနသေညျ။စညျးခကျြဝါးခကျြအညီ လိုးနကွေတာ လီးနဲ့ စဖုတျရိုကျသံထှကျနတောကိုတောငျ သတိမထားမိကွတော့ပေ။ အခကျြ ၅၀ လောကျလိုးပွီးတော့ ဦးမိုး လီးက ပုံမှနျထကျ မာလာပွီး သားအိမျအဝနားထိကိုပငျ ထိနအေောငျ ထိုးပွီးလိုးနေ၏။ ကမြ စပတျနှုတျခမျးသားတှေ ကငျြတကျလာပွီး အရညျတှေ တစကျစကျကလြာတော့သညျ။ “ဦးရယျ မွနျမွနျလိုးပေးပါတော့” “ပီးတော့မယျ အား အား” ဦးမိုး အားကုနျဆောငျ့ခလြိုကျပွီး ကမြစောကျပတျစောကျခေါငျးထဲသို့ အရညျနှေးနှေးတှေ ပနျးထညျ့လိုကျတော့ပသေညျ။ “အား” “အမလေး ဦးရယျ” ပွိုငျတူပီးသှား၍ ဦးမိုးလီးကွီး စောကျဖုတျထဲကနေ ထုတျလိုကျသညျ။ “ဖှတျ ဘလှတျ” ကပျြထုတျစညျးပိုငျနသေော ကမြ စောကျပတျမှ ဦးရဲ့လီးကွီးကြှတျသှားတော့သညျ။
“သမီးရယျ ကောငျးလိုကျတာ” “ဦးလိုးပေးတာ ခံလို့ကောငျးတယျ” ကွိမျးစပျနသေော ကမြစောကျပတျက လီးထုတျကာစ ပူထူသှား၍ အရညျတှထှေကျကလြာနသေညျ။ ဦးလီးက ထှကျလာသော သုတျရညျဖွူဖွူတှလေား ကမြစောကျခေါငျးမှ ထှကျလာသော စောကျရညျတှလေားမသိ တျောတျော ကောငျးသညျဆိုတာတော့ ကမြသိသညျ။ “ခဈြတယျ ဦးရယျ သမီးကို နောကျနတှေ့လေညျးလိုးနျော” “ဦးက အခြိနျတိုငျးလိုးခငျြနတော သမီးရယျ” ကမြ နဲ့ဦးမိုး ဝတျလဈစလဈကိုယျလုံးတှဖွေငျ့ တငျးကပျြစှာဖကျထားနမေိသညျ။
ဦးမိုးက ကမြနို့တှကေို စို့ပေးနဆေဲပငျ။နို့သီးခေါငျးတှလေညျး ကွိမျးစပျပူထူနသေျောလညျး ဦးမိုးစို့နတောကောငျးတော့ မလှတျခိုငျခငျြပေ။ မာနဆေဲ သူ့လီးကွီးကို ကမြဆုပျကိုငျထားလြှကျပငျ ဦးမိုးတို့ မပွနျခငျအခြိနျထိ တဈရကျခွား တဈခါလောကျ ကမြနဲ့ဦးမိုး လိုးဖွဈကွသေးသညျ။ အိမျပျေါမှာလဈရငျလဈသလို ၊အိမျနောကျက ငှကျပြောတောတှငျလညျး လူပွတျလြှငျ ဦးမိုးတဈယောကျကမြကို ချေါပွီးလိုးသညျ။ ကမြကို အပြိုစငျဖောကျခဲ့သော ဦးမိုးလီးအား မမနေိူ့ငျပေ။ ဦးမိုးက ပွောခဲ့သေးသညျ။
“နောကျနှဈကြောငျးပိတျရငျ ရနျကုနျလာခဲ့ သမီး ဦးတို့အိမျမှာလာနေ” သူ့အပွောကို ကမြသဘောပေါကျပါသညျ။ ကြောငျးတှေ ပွနျဖှငျ့တော့ ၉ တနျးကြောငျးသူကမြ တျောတျောဖှံ့ဖွိုးနသေညျ့ ခန်ဓာကိုယျအား ပိုငျဆိုငျထားသညျ။ ဦးမိုးက နှဈလ ၁ခါ ရှာကိုလာလညျဖွဈစမွဲပငျ ။ လာလညျသညျ့နတေို့ငျး နစေ့ဉျဆိုသလို ဦးမိုးနှငျ့အမွဲလိုးဖွဈသညျ။ ဦးမိုးလာသညျ့နတှေ့ဆေို ကမြတို့ ငတျမပွသေောရသေောကျနကွေသလို…. ပွီးပါပွီ။
ကျမ အသက် ၁၃ နှစ်။ ကျမတို့ရွာကို ရန်ကုန်မှရှိတဲ့ အမေ့အမျိုးတွေ အလည်လာကြတယ်။ ကျမ တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးဖူးလေ။ အမျိုး ရှိတယ် ဆိုလို့သာ သိရတာ မြင်လည်းမမြင်ဖူးကြပေပဲကိုး။ အမျိုးတွေ ၅ယောက်လောက်လာလည်ကြတာ အဲ့ထဲမှာ အမေ့မောင် တစ်ဝမ်းကွဲ ၂ယောက်ရယ်၊ အဖိုးလေးနဲ့ သူ့မိန်းမ ၊ ကျမ အဖိုးလေး ၁ယောက်ရယ် ကျမတို့ ကျောင်းပိတ်နွေရာသီရက်တွေဆိုတော့ ကျမလည်း အိမ်မှာထမင်းချက် ရေခပ် ပြီးရင် သငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားဆော့သေးတယ်။
ကျမ ဦးလေးဝမ်းကွဲ ၂ယောက်က ဦးဝေ နဲ့ ဦးမိုးလို့ခေါ်တယ်။ ဦးဝေက အိမ်ထောင်နဲ့ အသက် ၃၀ ကျော်။ဦးမိုးက လူပျို အသပ် ၂၇ လောက်။ သူတို့ ညီအကိုတွေက ရန်ကုန်မှာ taxi မောင်းကြတာ ကားသမားတွေပေါ့။ ဦးဝေက အရပ်နည်းနည်းပုတယ် အသားဖြူဖြူ ၊ဦးမိုးက အရပ်ရှည်တယ် အသားဖြူဖြူပဲ၊ ကျမကလည်း အပျိုဖော်ဝင်ကာစဆိုတော့ ထမိန်ကြီးကားယားကားယား ဝတ်ထားတော့ ဖင်ဖားဖားနဲ့ အပျိုကြီးလိုလိုပေါ့။
ဧည့်သည်တွေ ရောက်ပြီး ၂ရက်လောက်ကြာတော့ ကျမ စ သတိထားမိတာ ဦးမိုးတစ်ယောက် ကျမအနားက ဖြတ်သွားတိုင်း ကျမဖင်ကို မသိမသာရှပ်ထိ ကိုင်သွားတက်တာပဲ။ ကျမလည်း အစက သိပ်သတိမထားမိဘူးလေ။နောက်တော့ ကျမ ဆော့ရင်လည်း အမြဲကြည့်ကြည့်နေတက်တယ်။ သူ ကျမအနားက ဖြတ်သွားတိုင်း ကျမဖင်ကု ထိထိသွားတိုင်း ကျမရင်ထဲတထိပ်ထိပ်ဖြစ်သွားမိတယ်။ တနေ့ ဦးမိုးက “သမီး ခဏလာပါအုန်း” “ဟုတ်ကဲ့” သူထိုင်နေတဲ့ အနားကို ကျမတိုးသွားလိုက်သည်။
“လာ ဒီမှာထိုင်ပါအုန်း ပြောစရာရှိလို့” သူ့နံဘေး ကျမထိုင်လိုက်သည် ချက်ချင်း သူဘာမှမပြောသေး “ငြိမ်ငြိမ်လေးနေနော်” ဟု ဆိုပီး ကျမနို့ထိပ်ကလေးကို စမ်းသလိုလိုဖြင့် ထိလိုက်သည်။ ကျမ လန့်သွားသော်လည်း ငြိမ်နေလိုက်သည်။ ကျမကလည်း ရှမီးအကျီင်္ပဲဝတ်ထားတော့ နို့တွေက ဖောင်းကားနေပြီး အသာနိုက်လို့ရတယ်လေ။ တဖြည်းဖြည်း ကျမ အကျီင်္ထဲသူ့လက်တွေ လျှိဝင်လာကာ နို့သီးခေါင်းထိပ်တွေကို အသာဆွဲပွတ်နေ၏။သူ့လက်ကြမ်းတွေနဲ့ ဖိဖိပြီးကိုင်တော့ ကျမနို့သေးသေးလေးတွေ တောင်လာတော့သည်။
ကျမ ဘာမှမပြောရဲ နို့ကို ကိုင်ထားပြီး ကျမအကျီင်္ထဲနိုက်ထားသော သူ့လက်တွေကို အပြင်မှကိုင်ထားလိုက်၏။ “နို့လေးတွေကသေးသေးလေးတွေမလို့” “နာလား” “ငြိမ်ငြိမ်လေးနေနော်” သူ့ပါးစပ်ကလည်း တတွတ်တွတ်ပြောနေသေးသည်။ ကျမ အသာငြိမ်ခံနေလိုက်သည်။ ခဏကြာတော့ ကျမအိမ်ကလူကြီးတွေ မြင်သွားမှာကို စိုးရိမ်မိသွားပြီး ရုတ်တရက်ထရပ်လိုက်မိသည်။ ဦးမိုးက ကျမကို ကြည့်နေလိုက်၏။ ကျမ ရှက်လည်းရှက်သွားပြီးထွက်ပြေးသွားမိသည်။ ကျမ နို့အစုံမှာ သူ့လက်ဗွေရာတွေ ကပ်ညှိလျှက်နေနေသေးသည်။
ဖောင်းကားနေသော နို့တွေနှင့် တင်းကားလာသော ကျမစောက်ဖုတ်က ကာမကိုလိုလားနေသည်လားမသိပေ။ စောက်ဖုတ်ဝကို ကိုင်လိုက်တော့ အရည်တွေရွှမ်းနေတော့သည်။ ညအိပ်တော့ ကျမတွေးနေမိသည်။ ဦးမိုးသာ လိုးခဲ့ရင် ကျမ ခံမှာလား ဆိုတာ။ဒါပေမယ့် အဲ့နေ့တနေ့လုံး သူ့ကိုကျမမတွေ့ရဲပေ။မနက်ရောက်တော့ အိမ်ကအမေတို့က တစ်ဖက်ရွာက အမျိုးတွေအလှူကို သွားဖို့ပြင်ဆင်နေကြသည်။ ကျမ အဖိုးတွေရော ပေါ့။ ကျမကတော့ အိမ်မှာဆော့ရင်းနဲ့ နေခဲ့မည်လို့ ပြောလိုက်သည်။ ဦးမိုးကတော့ သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့်တွေ့မည်ဟုဆိုကာ မနက်အစောထဲက ထွက်သွားသည်တဲ့။
အမေတို့ အားလုံးထွက်သွားကြတော့ ကျမ အိမ်မှာထမင်းအိုးတည်ရင်း ကျန်နေခဲ့လိုက်သည်။ကျယ်ဝန်းလှသော ကျမတို့ခြံဝိုင်းထဲတွင် ကျမတို့ အိမ်တစ်အိမ်သာ ထီးထီကြီးရှိနေ၏။ထမင်းအိုး တည်အပြီး ခဏအကြာကျမရေချိုးလိုက်သည်။ ကျမ ရေချိုးပြီးထမိန်ရင်လျားဖြင့် အိမ်ပေါ်သို့ရောက်တော့ နောက်မှ ဦးမိုးအိမ်ထဲသို့ ဝင်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကျမလည်း “ဦးမိုး ပြန်လာပြီလား” “အင်း” အိမ်တွင် ကျမနှင့် သူသာ ၂ယောက်တည်း။ သူဘာတွေးနေလည်းဆိုတာတော့ ကျမ မသိပေ။ ကျမ စောက်ဖုတ်တွေ ကလိကလိဖြစ်လာကာ ကြက်သီးတွေထလာတော့သည်။
ကျမလည်း အိမ်ခန်းထဲမဝင်သေးဘဲ ထမိန်ပြင်ဝတ်လိုက်သည်။ ထမိန်က ပါးတော့ ကျမဖင်လုံးကို အတိုင်းသား ကောကိကြောင်းရာ ပေါ်နေသည်။ ဦးမိုးက အိမ်ရှေ့စက်တီတွင် ထိုင်နေ၏။ ကျမ အိမ်ခန်းထဲဝင်ပြီး ခဏအကြာ နောက်မှမာကြောကြောအရာတစ်ခု တင်ပါးမှာလာထောက်နေပေသည်။လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဦးမိုး “ဟင် ဦးမိုး” “ရှုး တိုးတိုး” သူ့ပုဆိုးကြားမှ ထောင်ထွက်နေသော အရာတစ်ခု “ဦးမိုး စိတ်မထိန်းနိူင်တော့ဘူး ခလေး” “ရှင်” ဦးမိုးက ပြောရင်း ကျမကို ဆွဲဖက်လိုက်ကာ ကုတင်ပေါ်သို့ လှဲလိုက်သည်။ကျမ ဘာမှပြောချိန်မရလိုက်ပါ။ကျမ ထမိန်အပေါ်ပိုင်းကို ချွတ်၍ နို့စူစူလေးတွေကို ဖိချေကာ လက်ဖြင့်ပွတ်နေ၏။ “အိုး” ကျမ ကျင်တက်သွားကာ တုန်သွားမိသည်။
သူ့လက်တဖက်မှ ကျမပေါင်ကို ကိုင်ပြီး ပေါင်မှတစ်ဆင့် ကျမ စောက်ဖုတ်ကို အုပ်မိုးကာကိုင်လိုက်သည်။ ကျမ တစ်ကိုယ်လုံးယားလာပြီး “ဦးမိုး အဟင့် ဟင့်” “တိုးတိုးလေးနေနော် ဦးမိုးက ကောင်းအောင်လုပ်ပေးမလို့” ကျမ ထမိန်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်ကာ စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းကိုနိုက်၍ သူ့လက်ခလယ်ကြီးဖြင့် ပွတ်ပေးနေ၏။ “အား ဦးမိုး သမီးရှက်တယ်” “ဦးမိုးလည်း အကုန်ချွတ်မှာပဲ မရှက်နဲ့နော်” သူပြောရင်း ပုဆိုးကိုချွတ်လိုက်၏။ အကြောတွေ ပြိုင်းထနေသော သူ့လီးကြီး ဒစ်လန်နေပြီး မာတောင်နေ၏။ တော်တော်ကြီး၏။ ဦးမိုးက အရပ်လည်းရှည်တော့ လီးကလည်း ၆လက်မကျော် ရှည်နေသည်။
လုံးပတ်က ကျမလက်ဖြင့်ဆုပ်ကိုင်လျှင်တောင် ပိုကြီးနေသေးသည်။ ကျမ လက်ကိုဆွဲယူကာ သူ့လီးတွေကို ကိုင်စေသည်။ကျမလည်း ကျမကိုလိုးမယ့် သူ့လီးကြီးကိုကိုင်လိုက်၏။ မာတောင့်နေသည်။ ဒစ်ပြဲလန်ကာ ဒစ်ထည့်လျှင်ပင် ကျမစောက်ဖုတ် ကွဲမည့်အတိုင်းပင်။ ကျမ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဖြဲကားပြီး သူ့ခေါင်းဝင်၍ စောက်စိလေးကို လျှာနဲ့ လက်ပေးတော့ ကျမ အော်လိုက်မိ၏။ “အား ရှီးရှိး ယားတယ် ဦးမိုး” သူခေါင်းကြီးကို ကိုင်ကာ “အမလေး ယားလိုက်တာ” “ဦးမိုး လီးကိုလည်း စုတ်ပေးအုန်း” “အကြီးကြီးပဲ ဦးမိုး” “သမီး အလိုးခံဖူးလား” “ဟအင်း” ကျမ အလိုးမခံဖူးပေမယ့် စာအုပ်တွေဖတ် ကာအတွေ့ကြုံတော့ရနေ၏။
ကျမ ဦးမိုးလီးကြီးကို ပါးစပ်ဖြင့်ဆွဲဆွဲစုပ်လိုက်တော့ ဦးမိုးကော့တက်ကာ “လိုးကြရအောင်ကွာ” ဦးမိုး စိတ်မထိန်းနိူင်တော့ပဲ ကျမစောက်ဖုတ်ကို တံတွေးဆွတ်ကာ ဖြဲလိုက်တော့သည်။တံတွေးဆွတ်မှ ဝင်မှာကိုး သူ့လီးက နဲတာကြီးမှမဟုတ်တာ “အား” ဒစ်အကုန်မဝင်သေးခင်မှာ ကျမ နာသွား၏။နို့တွေကို စို့ပေးကာ ဒစ်ကိုနှုတ်လိုက် ပြန်ထည့်လိုက်နှင့် ကျမဖီးတက်လာအောင် လုပ်ပေးနေသည်။ “အား ဦးမိုးရယ် သမီးကိုလိုးပါတော့။ ဦးမိုး လိုးတာခံချင်လှပြီး စောက်ဖူတ်ကွဲရင် ကွဲပစေ” ကျမ ပစပ်ကလည်း အရှက်မရှိတော့ပေ။ အလိုးခံချင်လှပြီကိုး နီရဲနေသော သူ့လီးတွေက ကျမကို အသက်ထွက်အောင် လိူးတော့မည့်ဟန် “အား” လီးတဝက်ဝင်တော့ ကျမအားကုန်အော်လိုက်သည်။
ဦးမိုးချက်ချင်း လီးကို ကျမစောက်ခေါင်းထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်ကာ “စောက်ဖုတ်က အမှေးပါးလေးဖောက်လိုက်ပြီနော်။ သမီးကို ဦးမိုးလိုးပေးမယ်နော်။ ကောင်းကောင်းလေး လိုးပေးမယ်မအော်နဲ့နော်” ကျမခေါင်းတွေ တဆကိဆက်ငြိမ့်၍ သူ့လီးကြီးကို ကျမစောက်ခေါင်းထဲ တေ့ပေးလိုက်ကာ သူဖင်ကြီးကိုဆွဲထားလိုက်၏။ ဦးမိုးလီးကြီးက ကျမစောက်ဖုတ်ထဲကို အတိုင်းအဆမရှိဝင်သွားတော့သည်။ “အား” “အား ကောင်းလိုက်တာ သမီးရယ် စီးပိုင်နေတာပဲ” ကျမလည်း အော် သူကလည်းအော်၍ ကျမအပျိုမှေးပါး ပေါက်သွားပီး သွေးတွေထွက်လာတာတောင် မနာတော့ပဲ ဦးမိုးလီးကြီးဝင်ထားတာကိုတောင် ပြန်မထုတ်ခိုင်းချင်တော့ပေ။
“ဆောက့်လိုးမယ်နော်” “အင်း နာနာလေးလိုး ဦးရယ်” “ဖတ် ဖွတ် ဖွတ် ဘလွတ်” “အား အ အ အ အမလေး အား” “အင့် အင့် “ “ပြွတ် ပြွစ့် ဖွတ် ဖွတ်” စောင့်ချက်တွေ မြန်ဆန်လာကာ ကျမစောက်ခေါင်းထဲမှ အသံပေါင်းစုံထွက်လာတော့သည်။ ပက်လက်လန်လိုးတာ အားမရတော့ ဦးမိုးက ကျမကို “လေးဖက်ထောက် ကုန်းပေး ဦးအနောက်က ဆောင့်လိူးပေးမယ်” “အင်း ဦးသမီးကို မညာမတာလိုးနော်” ကျမကုန်ပေးတော့ ဦးမိုးက အနောက်မှာ လီးတေ့ကာ ဆောင့်ထည့်လိုက်၏။ “အ ရှီးရှိး ဦးရယ် စောက်ဖုတ်တွေပြဲအောင် လုပ်နေတာလား အဟင့်ဟင့်” “အား ကောင်းလိုက်တာကွာ “ ခွေးလိုးလိုးကာ ကျမစောက်ခေါင်းထဲမှ လီးက စောက်ဖုတ်ဝနဲ့ နံရံတွေကို ပွတ်ပွတ်နေတော့ ကျမ ပိုကောင်းလာကာ ဦးမိုးလီးကြီးကို ဆွဲညှစ်လိုက်၏။
“နေ့တိုင်းလိုးမယ်နော် သမီး” “အား ဦးရယ် မြန်မြန်လိုးပေး အ အ အ “ “အင့် အင့် အား အား အား” “ဖွတ် ပလွတ် ပလွတ် ဖတ် ဖတ်” “အ အမေရေး နာလိုက်တာ အမလေး လီးကြီးကြီးနဲ့ ဆောင့်လိုးနေတာ” “အ အ အ “ ဦးမိုးလည်း ကောင်းလာ၍ အသံထွက်၍ ခပ်မြန်မြန်ဆောင့်လာသည်။ “အား ဦးရယ် သမီးကို နေ့တိုင်းလိုးပေးနော်” “အင်း သမီးစောက်ဖုတ်လေးက ကောင်းတာကွာ” “ဦးလီးကြီးကလည်း သန်လိုက်တာ” “ဦးမိုးရယ် သမီး စောက်ဖုတ်လေးကွဲပါပြီ” “အင့် အင့် အင့်” ဦးမိုးကလည်း မနားတမ်းဆက်တိုက်လိုးနေတော့သည်။
ကျမ လည်း ကောင်းလာ၍ ကော့ကော့ပေးနေသည်။စည်းချက်ဝါးချက်အညီ လိုးနေကြတာ လီးနဲ့ စဖုတ်ရိုက်သံထွက်နေတာကိုတောင် သတိမထားမိကြတော့ပေ။ အချက် ၅၀ လောက်လိုးပြီးတော့ ဦးမိုး လီးက ပုံမှန်ထက် မာလာပြီး သားအိမ်အဝနားထိကိုပင် ထိနေအောင် ထိုးပြီးလိုးနေ၏။ ကျမ စပတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေ ကျင်တက်လာပြီး အရည်တွေ တစက်စက်ကျလာတော့သည်။ “ဦးရယ် မြန်မြန်လိုးပေးပါတော့” “ပီးတော့မယ် အား အား” ဦးမိုး အားကုန်ဆောင့်ချလိုက်ပြီး ကျမစောက်ပတ်စောက်ခေါင်းထဲသို့ အရည်နွေးနွေးတွေ ပန်းထည့်လိုက်တော့ပေသည်။ “အား” “အမလေး ဦးရယ်” ပြိုင်တူပီးသွား၍ ဦးမိုးလီးကြီး စောက်ဖုတ်ထဲကနေ ထုတ်လိုက်သည်။ “ဖွတ် ဘလွတ်” ကျပ်ထုတ်စည်းပိုင်နေသော ကျမ စောက်ပတ်မှ ဦးရဲ့လီးကြီးကျွတ်သွားတော့သည်။
“သမီးရယ် ကောင်းလိုက်တာ” “ဦးလိုးပေးတာ ခံလို့ကောင်းတယ်” ကြိမ်းစပ်နေသော ကျမစောက်ပတ်က လီးထုတ်ကာစ ပူထူသွား၍ အရည်တွေထွက်ကျလာနေသည်။ ဦးလီးက ထွက်လာသော သုတ်ရည်ဖြူဖြူတွေလား ကျမစောက်ခေါင်းမှ ထွက်လာသော စောက်ရည်တွေလားမသိ တော်တော် ကောင်းသည်ဆိုတာတော့ ကျမသိသည်။ “ချစ်တယ် ဦးရယ် သမီးကို နောက်နေ့တွေလည်းလိုးနော်” “ဦးက အချိန်တိုင်းလိုးချင်နေတာ သမီးရယ်” ကျမ နဲ့ဦးမိုး ဝတ်လစ်စလစ်ကိုယ်လုံးတွေဖြင့် တင်းကျပ်စွာဖက်ထားနေမိသည်။
ဦးမိုးက ကျမနို့တွေကို စို့ပေးနေဆဲပင်။နို့သီးခေါင်းတွေလည်း ကြိမ်းစပ်ပူထူနေသော်လည်း ဦးမိုးစို့နေတာကောင်းတော့ မလွှတ်ခိုင်ချင်ပေ။ မာနေဆဲ သူ့လီးကြီးကို ကျမဆုပ်ကိုင်ထားလျှက်ပင် ဦးမိုးတို့ မပြန်ခင်အချိန်ထိ တစ်ရက်ခြား တစ်ခါလောက် ကျမနဲ့ဦးမိုး လိုးဖြစ်ကြသေးသည်။ အိမ်ပေါ်မှာလစ်ရင်လစ်သလို ၊အိမ်နောက်က ငှက်ပျောတောတွင်လည်း လူပြတ်လျှင် ဦးမိုးတစ်ယောက်ကျမကို ခေါ်ပြီးလိုးသည်။ ကျမကို အပျိုစင်ဖောက်ခဲ့သော ဦးမိုးလီးအား မမေ့နိူင်ပေ။ ဦးမိုးက ပြောခဲ့သေးသည်။
“နောက်နှစ်ကျောင်းပိတ်ရင် ရန်ကုန်လာခဲ့ သမီး ဦးတို့အိမ်မှာလာနေ” သူ့အပြောကို ကျမသဘောပေါက်ပါသည်။ ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်တော့ ၉ တန်းကျောင်းသူကျမ တော်တော်ဖွံ့ဖြိုးနေသည့် ခန္ဓာကိုယ်အား ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ဦးမိုးက နှစ်လ ၁ခါ ရွာကိုလာလည်ဖြစ်စမြဲပင် ။ လာလည်သည့်နေ့တိုင်း နေ့စဉ်ဆိုသလို ဦးမိုးနှင့်အမြဲလိုးဖြစ်သည်။ ဦးမိုးလာသည့်နေ့တွေဆို ကျမတို့ ငတ်မပြေသောရေသောက်နေကြသလို…. ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ငတျမပွေ